किन मिडिया र नागरिकलाई समय दिँदैनन् विराटनगरका मेयर ? – Karnalikhabar
किन मिडिया र नागरिकलाई समय दिँदैनन् विराटनगरका मेयर ?
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ । यो बिचमा धेरै कामहरू भएको दाबी गर्ने मेयर पराजुली मिडियासँग भागी हिँड्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
अन्य विषयमा सरल स्वभावका देखिने मेयर विकास निर्माण र निर्वाचित उपलब्धिको बारेमा सोधी खोजीका लागि जब मिडियाकर्मीले फोन गरेर समय माग्छन् त्यसपछि उनी आफू व्यस्त रहेको भन्न छुटाउँदैनन् ।यस्तै सास्ती पाएका केही मिडियाकर्मीहरू छन् जो चुनावको बेला जारी भएको घोषणा पत्रको बारेमा मेयरको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा निक्कै मेहनत गरेर समय पाए ।
पत्रकार उत्तम पोखरेलले उनी कार्यरत टेलिभिजनका लागि जनप्रतिनिधिको ५ बर्से कार्यकालको उपलब्धिको बारेमा जानकारी लिन फोन गर्दा उनले धेरै पटक फोन नै उठाएनन् । फोन उठाएपनि पटक पटक समय थपे र समय नै दिएनन् । आजित भएपछि एसएमएस गरेर तपाईँको भनाई कोर्ट नगरी समाचार हाल्छु भनेपछि मात्र मेयर पराजुलीले समय दिएको पोखरेलले बताए ।
सास्ती पाएका अर्का पत्रकार हुन् राजु पौडेल । उनलाई मेयरका स्वकीय सचिव लोकेन्द्र तिम्सिनाले प्रेस सल्लाहकार कौशल निरौलालाई मेयरको समय लिन भने । पटक पटक निरौलालाई मेयरको समय लिन उनले फोन गरे तर उनले फेरी स्वकीयसँग समय लिन भनेपछि मेयरकोमा फोन गर्दा पनि समय नमिलाउने गरेको पौडेलको गुनासो छ । ‘पटक पटक मेयरलाई फोन गर्दा स्वकीयले फोन उठाउँछन्,’ उनले भने, ‘स्वकीयले सञ्चार संयोजकलाई समय लिन भन्ने अनि सञ्चार संयोजकले स्वकीयलाई देखाउँदा निक्कै समस्या झेल्नु परेको छ ।’
हरेकदिन समाचारकै लागि काम गर्ने मिडियाकर्मीहरू विराटनगरका मेयरदेखि हैरान भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका कोषाध्यक्ष अभयकुमार राईलाई पनि विकास निर्माणको बारेमा बुझ्न फोन गर्दा स्वकीयसँग कुरा गर्न भन्दै मेयर पन्छिएका थिए ।
मकालुखबरले मेयर भीम पराजुलीसँग समग्र ५ वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको कामको बारेमा जानकारी दिन धेरै पटक फोन गर्‍यो तर, उनले समय दिनै चाहेनन् । मेयर पराजुलीका स्वकीय तिम्सिनाले फोन उठाउने र मेयरको समय लिन सञ्चार सल्लाहकारलाई फोन गर्न भन्ने बाहेक समय नहुने बताए । सञ्चार सल्लाहकार भने स्वकीय लोकेन्द्रलाई नै फोन गर्न भन्ने गरेका छन् । समय लिने बारेमा लामो समयदेखि यस्तै हुँदै आएको छ। यो क्रम पछिल्लो एक वर्ष देखि हुँदै आएको मिडियाकर्मीहरू बताउँछन् । यी मिडियाका कुरा मात्र भए ।
दिनभरि गाडीमा घुमेर गफमा दिन कटाइदिने मेयर पराजुलीले नागरिकका गुनासामा वास्तै नगर्ने र समय नै नदिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यस्ता समस्या नागरिकका हरेक दिनका हुन् । कार्यालयमा जाँदा मेयर भेटिन्नन् । फोन गर्दा स्वकीयले उठाउँछन् अनि तपाईँको के छ भनेर सोध्छन् मेयर शाव व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर फोन काटिदिन्छन् । यस बारेमा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर पराजुलीले मकालुकर्मीलाई फागु पूर्णिमाको दिन यस बारेमा कुरा गर्न भोलि समय दिन्छु भनेकोमा यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि समय दिएका छैनन् ।
बिहे, व्रतबन्ध, मान्छे मरेका ठाउँमा, मन्दिरका पूजामा, पास्नी, न्वारानमा समय दिने मेयर नागरिकका समस्यामा चासो नै नदिने गरेको गुनासो पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलको छ । ‘भोलि पर्सी भनेर टार्ने काम मेयर ज्यूबाट हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकका समस्याबाट भागेर हुँदैन, समाधानको उपाय पनि दिनसक्नु पर्छ ।’
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १० का कृष्ण दाहाल आफ्नो समस्याको बारेमा मेयर पराजुलीलाई भेट्न चाहन्छन् । केही दिनदेखि उनले पनि समय पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधि नागरिकका समस्याको साझेदार बन्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘कारण बताएपछि भेटेर पुरा गर्दा सकिन्छ भने नागरिक पनि खुसी हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफूले निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिले वास्ता नगर्ने समय नदिने जस्ता अवस्थाले जनतामा नैराश्य बढ्दै जान्छ ।’
कारण सहितको भेट गर्न खोज्दा समय नै नदिने भन्ने जनप्रतिनिधिबाट हुन नहुने उनको भनाई छ । नागरिकका समस्यामा साझेदार बन्नु पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छोटे राजाको रूपमा देखिएका छन् ।
अघिल्लो - डेढ घण्टा केबलकारमा अड्किए यात्रु
पीएनजीलाई हराउँदै फाइनल पुग्ने योजनामा नेपाल - पछिल्लो